मोटोबकल्क - यो कृषि उपकरण हो, जुन गर्मीको निवासी को कामलाई धेरै सुविधा दिन सकिन्छ, जसमा ठूलो भौतिक जटिल प्रक्रियाहरु लाई मेशिन बनाउन सकिन्छ। र यो भारी मोटोबकल हो जसले कुनै पनि किसिमको मल बनाउने र प्रशोधन गर्ने अनुमति दिन्छ, यसको अलावा यो लगभग कुनै पनि संलग्नकहरू - पहाड , हलहरू, कटरहरू र अन्य माझ लिन सकिन्छ।
भारी मोटोबक छनौट गर्नुहोस्
भारीमा मोटर ब्लकहरूमा 300 किलोसम्मको वजन र 6-12 एचपीको शक्ति समावेश छ। यस्तो उपकरणले व्यावसायिक उपकरणलाई बुझाउँछ। वास्तवमा, यो एक मिनी ट्रयाक्टर हो, जसको सहायताले कुञ्जीलाई प्रसोधन गर्न सम्भव हुन सक्छ। यो प्राय: लन्स सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ, बर्फ फसल उठाउँछ र कार्गो पनि ट्राफिक प्रयोग गरिन्छ।
यदि तपाईसँग 1-3 हेक्टेयरको साजिश छ भने यो भारी शुल्क कर्तव्य भारी शुल्क ट्रक खरीद गर्न यो सल्लाह छ। यो उपकरण प्राय: किसानहरू र सांप्रदायिक सेवाहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। एक ठूलो प्लस भारी मोटर ब्लक - एक विस्तृत विविधता मा संलग्न।
कुन प्रकारको इञ्जिन छनौट गर्ने निर्णय - डीजल वा पेट्रोल, तपाईले उनीहरूको मतभेद र सुविधाहरू बुझ्न आवश्यक छ। त्यसोभए, भारी डीजल मोटर ब्लक सबैभन्दा टिकाऊ छ, त्यसको स्रोत 3000 घण्टा छ। एकै समयमा, यो अधिक किफायती ईन्धन खपत र आपरेशन समयमा भागहरूमा कम लुगा लगाइयो।
त्यहाँ डीजल कमजोरीहरू छन्: ठूला ठूला ठूला आकारहरू, साथै उच्च लागत, जसले मोटर ब्लकको लागि उच्च मूल्यको रूपमा लिन्छ।
पेट्रोल इन्जिनको रूपमा, डीजलसँग समान शक्तिको साथ, यो एकदम न्यूनतम आकारको हुन सक्छ। यस्तो इन्जिनको लागत कम छ, र विनाश इन्जिन घडीको निचला रिजर्भ र नि: कम उत्पादकता हो। तर पेट्रोल इन्जिनको साथ काम गर्न सजिलो छ, यो विशेष कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन।
इन्जिनको छनौटको अतिरिक्त, तपाइँलाई मोटोबक्ल प्रयोग गरी सुविधामा ध्यान दिन आवश्यक छ। अनुकूलतम, कि समायोजन को रूप मा स्टीयरिंग को रूप मा यो तत्वहरु थिए, मिलिहरु मा शंका छ, निलंबन नियंत्रण रड, अंतर अनलक लीवर, आपातकालीन इन्जिन रोक्न।
रूसी उत्पादनको भारी मोटर ब्लक
रूसी उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो भारी मोटरसाइकल इकाई एग्रो मोटोबलक हो। एक शक्तिशाली motoblock आयातित एनालॉगबाट कम परिचालन लागत र बहुमुखीता संग फरक छ। यसको विशेष युग्मनले अन्य निर्माताहरूबाट संलग्नहरूको प्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।
रूसी निर्माताहरु को मोटोब्लाक, ब्रान्डहरु "नेवी" र "सलाम" को अंतर्गत उत्पादित, पनि लोकप्रिय छन्। डीजल एकाइहरू सञ्चालन गर्न, सजिलो, बहुकर्मिक र विशेष रूपमा भारी मिट्टी उपचारको लागि डिजाइन गरिएको छ।
बाथरूमको लागि एक कैबिनेट संग सिङ्क
एलईडी लैंप कसरी छनौट गर्ने?
हातको लागि काठको लागि कटर
रोटी निर्माता कसरी प्रयोग गर्ने?
मिनी माइक्रो माइक्रोवेव
निर्मित भान्सा उपकरणहरू
ग्लास सिरेमिक हब
तपाईंको घरको लागि भ्याम्प क्लीनर कसरी छनौट गर्ने?
खुट्टाको लागि मालिश
नाश्ताको लागि के यो राम्रो छ?
हेमेटोजल विशेषज्ञ - यो के हो, उसले के गर्छ र जब डाक्टर चाहिन्छ?
भरिएको अण्डा - toppings
टाउको दुखाइको कारण
9 स्टार टालीम्यान्स: रहस्यहरु जो हस्तियाँ को पसंदीदा उपसाधन लुकाते हो
पिज्जा - क्यालोरी
सनान्ना नस्ल को बिरालो
किम कार्दशियनले खुसीसाथ आफ्नो शरीरको प्रदर्शन गर्न संकोच गर्दैन
आफ्नै हातले ग्लासमा चित्रकारी गर्दै
पुरुष मनोविज्ञानलाई प्रेममा
चिकन जांघहरू कसरी पकाउनु स्वादिष्ट छ?
कड देखि माछा कटरलेट
हेलोवीन पोशाक विचारहरू
वसन्तमा गुलाबको गुलाबको पुनरुत्थान
जोश हार्टनट र तसिन एग्रीर्ट फेरि आमाबाबु भए
फूल पिइक पूंछ - हानि वा राम्रो?
कथा कथा - प्रकार र मार्केटिङ स्वागत को रहस्य